कोरियामा कार्यरत अवधिमा परिवार भेट्न नपाएर डिप्रेसनको शिकार र आत्महत्या गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढेको हैन। - Vision Nepal TV
कोरियामा कार्यरत अवधिमा परिवार भेट्न नपाएर डिप्रेसनको शिकार र आत्महत्या गर्ने नेपालीहरुको संख्या बढेको हैन।
Published: April 9, 2018 | 5:53 am | सोमवार, चैत्र २६, २०७४ | ४६६७ पटक पढिएको
डोलु आले मगर,
सरकारले नेपाली कामदारलाई करार अवधिमा कम्तिमा एकपटक आफ्नो परिवारलाई कोरिया लैजान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको समाचार अनलाइन खबरमा पढियो। यस्तो प्रस्ताव गरेको खबर केही वर्ष अगाडी पनि आएकै थियो।
कारण चाँहि नेपालीहरु कोरियामा डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्नेहरु बढे, त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सकिने रे! यो त टाउको दुखेको दवै नाइटोमा लगाए जस्तै हुने कुरा भो ।
पहिलो: कुरा त परिवार कोरियामा भेट्न नपाएर डिप्रेशन बढेको हैन। आत्महत्या गर्नेहरू केवल विवाहित मात्रै छैनन। त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने अविवाहितहरुको आत्महत्यालाई के मान्ने? भोलि गर्लफ्रेण्ड पनि कोरियामा मै बोलाएर भेट्न पाउनुपर्छ भन्ने?
दोस्रो: कुरा विदेशमा गएर आत्महत्या गर्नेहरु कोरियामा मात्रै छैनन्। मलेसिया, दुवै, कतार, साउदी, जापान, अष्ट्रेलिया तिर पनि छन्। त्यतातिर चाँहि त्यही देशमा परिवार भेट्न नपाएर डिप्रेसनको शिकार भएको र आत्महत्या गर्ने गरेको किन नभन्ने? र सोही देशमा कार्यरत कामदारले परिवार भेट्न र घुमाउन पाउनुपर्छ किन नभन्ने? के अरु देशमा भएका कामदारहरू नेपाली हैनन्? के उनिहरुलाई पनि परिवार आफु कार्यरत देशमै भेट्ने र घुमाउने रहर नहुँदो हो?
तेस्रो: कोरियामा इपीएस मार्फत आउनेहरुको पहिलो करार अवधी चार वर्ष दश महिनाको हो । यस अवधिमा नेपाल छुट्टीमा जाने कामदारहरु प्रायः स्वयम्ले प्लेनटिकट लिनुपर्छ । यदि कामदारले चाहाने हो भने यस अवधिमा २ देखि ३ वर्षमा एकपटक छुट्टी जाँदा पनि चार वर्ष दश महिना सजिलै जाने समयावधि हो ।
चौथो: कोरियामा अव‌ैधानीक रुपमा बस्न सहज छ । इपीएस मार्फत आएका कामदाहरु त आफ्नो समयावधि सकिएर अवैधानिकरुपमा बस्ने क्रम बढेको छ। त्यस्तै नेपाल बाट भिजिट भिसामा आउने, बिभिन्न कलाकार र विभिन्न खाले कार्यक्रम को नाममा आएर यतै लुकेर बस्नेहरु छन् भने, नेपालबाट कोरिया परिवार भेट्न जान पाउने व्यवस्था भयो भने कोरियामै अवैधानिकरुपमा बस्ने क्रम नबढ्ला?
र अन्तिममा: कोरियामा डिप्रेसन भएर आत्महत्या गर्ने नेपालीहरू बढ्नुको कारण कोरियामै परिवार भेट्न नपाएर होइन। बरु केही सुसाइड नोटलाई आधार मान्दा नेपाल बाट परिवारले अनावश्यक दबाब र पैसाको दबाब दिने गरेको तथ्यहरु भेटिन्छन्। अन्य थुप्रै कारणहरु छन् , जस्तो लामो समयावधि सम्म एकोहोरो काम, कम्पनीमा कार्यरत सहकर्मीहरु संगको बेमेल, कम्पनीको अनेक दबाब, व्यक्तिगत रोग तथा अनावश्यक शंका, प्रेममा धोका, नेपालबाट परिवारको आर्थिक कुरामा मात्रै दबाब आदि इत्यादि ।
यधपी, विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुलाई नेपाल बाट आफ्नो परिवार गएर विदेशमै भेट्न पाउने व्यवस्था भयो भने त यो राम्रै विषय हो। तर यो विषय कोरियाको हकमा मात्रै जोड दिनुको लक्ष्य चाँहि जे कारण देखाइएको छ, त्यो समस्याको समाधानको सहि उपाय हो जस्तो लाग्दैन ।
४६६८ Total Views ९ Views Today
← अन्तराष्ट्रिय नेपाली समाज दक्षिण कोरियाको अनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
मेगा एडु फेयर २०७४ धरानको अग्रसेन भवनमा आयोजना हुने →
मेरो देशका बहालवाला राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्रीलाई पनि विदेशमा अपमान गरिदियोस्।
“आशा गरौँ, शोकलाई शक्तिमा बदल्दै उदाउनेछं विमल”
“म पनि जिउँदो फर्किन्न होला घर”!